Beesha Sacad Oo Ku Ceebowdey Dadkii Maatada Ahaa Ee Ay Ku Laayeen Wadada Wadaagsin Iyo Iskudhicii Ka Danbeeyey!! – Codka Qaranka Tanadland
Beesha Sacad Oo Ku Ceebowdey Dadkii Maatada Ahaa Ee Ay Ku Laayeen Wadada Wadaagsin Iyo Iskudhicii Ka Danbeeyey!!
Dhowaan, taariikhdu markii ay ahayd (20/09/2017) waxaa lagu weerarary wadada Wadaagsin gaari uu wado nin ka soo jeeda beesha Awrtable. Nin kaasi wuxuu wadey 11 qofood oo maato ah oo beesha Habar-majeerteen ah. Dad kaas oo isugu jirey niman odayyaal ah, xaasas koodii iyo caruur toodii. Gaariga ninka Owrtable uu wadey waxaa iska lahaa beesha Habar-majeerteen oo isku aamini waayey inay maraan wadada Wadaagsin.
Intaasi markii ay dhacday ayaa ceelka God’dad oo beesha Sacad, (Muumin Aadan) iyo looboge ay ceelal qadiim ah ku leeyihiin. Laakiin hada fariisin u ah maleeshiyo yar beesha Habar-majeerteen ah. Oo ay ka dhigteen saldhig looga gurmado marka shacab looga xasuuqo wadada Wadaagsin, ayaa waxay u direen labo gaari oo tigniko ah meel God’dad uga beegan tuulada Bitaale. Oo ay ku ogaayeen qoysas Sacad ah oo reer miyi ah si ay uga soo aargoostaan.
Hadaba reermiyiga beesha Socad oo ogaa maleeshiyada fadhida ceelka God’dad inay weerar aargudasho ah ay ku soo qaadidoonaan, oo dagaal u diyaar garoobey ayaa waxaa ku soo baxay 2 dii tigniko oo ka soo baxay God’dad. Laakiin nasiibdaro, maleeshiyada beesha Sacad oo ahaa niman xayn ah oo aan badnayn qalad weyn bay sameeyeen. Qalad kaas oo ah markay arkeen labada gaari oo ku soo socota maysan sugin inta ay aad ugu soo dhawaanayaan. Ee waxay tacshiirad ku bilaabeen nimankii oo meel fog soo socda.
Maleeshiyada beesha Sacad maadaama ay rasaasta ku bilaabeen maleeshiyada labada gaari wata oo aad uga fog, waxay sababtay inay u suurogeli weydo in labada gaadheri ay ka toogtaan marka ugu horaysa. Walow, tacshiirad daas maleeshiyada beesha Sacad hal gaadheri ay ku dhaawacday. Maleeshiyadii labada gaari saaraa intay labadii gaari ka degteen intii ay tacshiiraddu socotey ayey rasaas ku bilaabeen maleeshiyadii Sacad. Labada gaari oo ay saaranyihiin labo qori oo dhashiikeyaal ah, iyo maleeshiyadii saarnaydna markaan waxaa u suurogashay inay marba marka ka danbaysa ay ku soo durkaan. Ayna madaxa ka toogtaan ama ay dhaawacaan ninkii Sacad ah oo madaxa kor u qaada.
Nimankii Sacad oo reer miyiga ahaa taleefan bay u dirsadeen tolkood iyaga oo leh “inta aan dhaawacayaga la qabsan oo aan la ruux-togin ha nalaga soo gaaro”. Goor beesha Sacad laga diley 4 nin rag 10 nin ka badan oo dhaawac ihina ay aad u dhiig bexeen. Aadna loogu soo dhawaaday oo ay halis ugu jiraan inay wada laayaan maleeshiyadii labada gaari wadatey. Ayaa maleeshiyadii beesha Sacad waxaa u yimid ciidan gurmad ah oo tigniko xayn ah wata. Lana malaynahayo inay wadada Bitaale iyo Gaalkacyo isku xirta ay soo qaadeen, oo ay aaga God’dad meel la siman ay wadada uga soo weecdeen.
Maleeshiyadii beesha Sacad ee gurmaddka ahaa markay goobtii yimaadeen waxay dib u riixeen maleeshiyadii Habar-majeerteen. Oo mar kaas ay soogaareen iyagana 2 gaari oo kale oo tigniko ah oo ka soo baxay magaalada Gaalkacyo. Maleeshiyada beesha Sacad ee gurmadka ah waxay sameeyeen qalad kale, oo ah inay islamarkiiba ay ka hareen markii maleeshiyada mahbarku ay dibugurasho sameeyeen. Oo waxay qaateen dhaawacoodii goobtiina waa’ay ka huleeleen. Isku dhacaas agoonta Habar-majeerteen waxaa uga dhaawacmay 3 nin oo keliya.
Arintaan ayaa waxay noqotay arin fadeexad ku ah beesha Sacad oo lagu maadsado. Indhowaale, beesha Sacad waxaa looga bartay inay beesha Dhebayaco si gaadmo ah ay dumarka iyo caruurta uga laayaan. Laakiin marka dagaal ka-fool ka-fool ah rag ay isaga horyimaadaan, beesha Sacad waxaa looga bartay debac la yaab leh iyo karti daro. Aan waayadii hore lagu aqoonjirin beesha Sacad. Arinta lala yaabanyahay waxa weeye, sababta ay ciidan gurmad ah oo ay ku maquuniyaan ugu soo diriwaayeen dhawrka nin ee soo weeraray. Iyo ciidan qabsada ceelka God’dad oo ay ogaayeen in maleeshiyadii yaraa oo joogey inay ka maqanyihiin. Hadii ay saas samaynlahaayeen beesha Sacad waxaa u soorogelilahaa, inay ku qasbaan naagaha Habar-majeerteen inay soo weeraraan banka God’dad. Dabcan beesha Habar-majeerteen oo aysan Gobalka Mudug ka joogin ciidan ku dhiirankara inay dagaal weyn galaan. Waxay is abaabuli lahaayeen mudo bil ilaa 3 bilod ah. Oo waxay soo uruursan lahaayeen waxay rag u dagaalama ay helikaraan.
Beesha Sacad qaabka ay dagaalka u gasho, sida ay u qararamsato xoogaaga maxaysatada ah ee Habar-majeerteen iyo sida ay maatadooda u laynahayaan markay arkaan. Habar-majeerteen badankooda siiba lafta (Cismaan Maxamuud) waxay ka dhaaran lahaayeen inay dagaal kaas wax lug ah ku yeeshaan, haba yaraatee. Sidii ay yeeleen sanadihii sagaashameeyadii markii ay maqleen (Ciise Riyoole) wixii ku dhacay. Jifada (Ciise Riyoole) oo dagaaladii sagaashameeyadii si xun ugu jabayna iyagu waxay ku mar-mar siinyoonlahaayeen. In wax dagaal ah aanu dhicin oo arinta baryo iyo maslaxo lagu dhameeyo.
Lakiin nasiibdaro waxaa ah hada nimankii Sacad oo belo’da ahaa, in naagihii habar-majeerteen ay ku haliilahayaan oo waxay leeyihiin
“Sacad wuxuu ku baaba’ay dagaalkii galbeedka xaafadda Garsoor ka dhacay oo isma ay difaacikaraan”.